🥇 uhlelo lokusebenza lwedeski losizo
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 605
Ividiyo yohlelo lokusebenza lwedeski losizo
Oda uhlelo lokusebenza lwedeski losizo
Eminyakeni yakamuva, uhlelo lokusebenza lweDeski Losizo seludume kakhulu ukubuyekeza izimiso zokuphatha ukwakheka kosekelo lobuchwepheshe noma lwesevisi, ukwethula izindlela ezintsha zenhlangano, ukuthuthukisa isevisi nokuthuthukisa ibhizinisi ngokwalo. Ukusebenza kohlelo lokusebenza kuqinisekiswe ngokuphindaphindiwe ekusebenzeni. Ukulawula amapharamitha eDeski Losizo kuba okuphelele, wonke amathuluzi adingekayo avela akuvumela ukuthi ulandelele umsebenzi wamanje nezicelo, ulungiselele imithetho nemibiko ngokuzenzakalelayo, futhi ulawule izinsiza nezindleko.
Uhlelo lweSoftware ye-USU (usu.kz) sekuyisikhathi eside lubhekene nezindaba zosekelo lobuchwepheshe olusezingeni eliphezulu, okwenza kube lula ukusetha imingcele ye-Help Desk, ukuze kukhishwe uhlelo lokusebenza olusebenza ngempumelelo kakhulu olufakazela ngokushesha. ukubaluleka kwayo. Uma usanda kujwayelana nohlelo lokusebenza, sincoma ukuthi uhlole isixhumi esibonakalayo esinobungane nesinembile. Akukho lutho olungadingekile lapha. Onjiniyela bavame ukuhluleka ukulinganisa phakathi kokusebenza nokukhanga okubonakalayo kwephrojekthi. Enye impahla ihlula enye. Irejista ye-Help Desk iqukethe imininingwane enemininingwane mayelana nokusebenza kwamanje namakhasimende. Abasebenzisi abanayo inkinga yokukhulisa izingobo zomlando zohlelo lokusebenza ukuze babuke ama-oda aqediwe, babheke amadokhumenti angobo yomlando, imibiko, futhi bafunde izinga lokusebenzelana namakhasimende. Ukuhamba komsebenzi kuboniswa ngokuqondile uhlelo lokusebenza ngesikhathi sangempela. Lokhu kwenza kube lula ukuphendula ezinkingeni, ukuqapha isikhundla sesikhwama sezinto ezibonakalayo kanye nezinsiza zabasebenzi, ukulawula isikhathi somyalelo, xhumana ngokushesha namakhasimende ukuze ucacise imininingwane ethile.
Nge-Help Desk kulula ukushintshanisa ulwazi, amafayela ayingcaca, umbhalo, imibiko yabaphathi, ukulandelela itafula labasebenzi ngohlelo lokusebenza olwakhelwe ngaphakathi. Uma i-oda limisiwe, abasebenzisi abanabo ubunzima ekunqumeni izizathu zokulibaziseka. Ayikhishiwe inketho yokusebenzisa uhlelo lokusebenza ukukhuthaza amasevisi eDeski Losizo, ukuzibandakanya ekukhangiseni kwama-SMS, ukuxhumana namakhasimende. Imojuli ehlukile yenziwe yale misebenzi. Izinkampani eziningi zenza amakhono e-CRM abe enye yezidingo eziphezulu zamaphrojekthi ezishintshayo.
Okwamanje, izinhlelo zeDeski Losizo ziyasetshenziswa ezimbonini eziningi. Indawo yokusebenza yohlelo lokusebenza ayikhawulelwe ku-IT-sphere kuphela. Isofthiwe ingasetshenziswa futhi izinhlangano zikahulumeni ezigxile ekusebenzelaneni nenani labantu, amafemu amancane, nosomabhizinisi ngabanye. Okuzenzakalelayo kungaba yisixazululo esingcono kakhulu. Ayikho indlela elula, ephezulu, futhi enokwethenjelwa yokuqondisa izikhundla zokuphatha nenhlangano, ukwethula izindlela ezintsha, ukuqapha ukusebenza kwesakhiwo kanye nokuxhumana kwangaphandle. Uhlelo lokusebenza lweDeski Losizo luqapha izici zokusebenza zesevisi nokusekelwa kobuchwepheshe, luqaphe ukuqhubeka nezinsuku eziwumnqamulajuqu zezicelo, futhi lunikeze ukwesekwa kwamadokhumenti. Asikho isidingo sokuchitha isikhathi esengeziwe ekusebenzeni okujwayelekile, okuhlanganisa ukwamukela izicelo nokufaka i-oda, izinqubo zizenzakalela ngokugcwele. Kulula kakhulu ukulandelela kokubili imisebenzi yamanje kanye nemicimbi ehleliwe ngokusebenzisa umhleli oyisisekelo. Uma ucingo oluthile ludinga izinsiza ezengeziwe, umsizi we-elekthronikhi uyakukhumbuza ngalokhu. Inkundla yeDeski Losizo ilungele bonke abasebenzisi ngaphandle kwemikhawulo engathi sína. Izinga lokufunda ngekhompyutha alinamsebenzi nhlobo.
Uhlelo lokusebenza luhlukanisa izinqubo zokukhiqiza (ngokuqondile imisebenzi yosekelo lobuchwepheshe) lube inombolo ethile yezigaba ukuze kuqiniswe ikhwalithi yokulawula nokuphendula ngokushesha ezinkingeni ezincane. Ithuba manje selivuliwe ukuxhumana ngqo namakhasimende, ukushintshana ngolwazi, nokuthumela i-SMS. Ngaphandle kwalokho, abasebenzisi bangashintshanisa ngokushesha amafayela wesithombe nombhalo, imibiko yokuhlaziya nezezimali.
Ukukhiqiza kochwepheshe beDeski Losizo kuboniswa ngokucacile ezikrinini, okuvumela ukulungisa ngokuzenzakalelayo izinga lomsebenzi wamanje futhi kusethwe imisebenzi yabasebenzi elandelayo. Ngosizo lohlelo lokusebenza, ukusebenza kochwepheshe ngamunye kuhlolwa, okusiza abasebenzi besikhathi esigcwele bathuthukise amakhono, banqume izinto eziza kuqala, izikhundla eziyinkinga zenhlangano. Imojuli yesaziso ifakwe ngokuzenzakalelayo. Lena indlela elula yokugcina umunwe wakho ku-pulse yemicimbi. Uma kunesidingo, kufanele udidwe yizinkinga zokuhlanganisa inkundla nezinsizakalo nezinsizakalo ezithuthukisiwe. Lolu hlelo luyisixazululo esiphelele sezinkampani ze-IT ezihluke ngokuphelele, izinsiza zobuchwepheshe noma zesevisi, izikhungo zikahulumeni, noma abantu ngabanye.
Akuwona wonke amathuluzi afakiwe kunguqulo eyisisekelo. Ezinye izinketho ziyatholakala ngenkokhelo. Kufanele ufunde ngokucophelela uhlu oluhambisanayo. Qala ukukhetha umkhiqizo olungile ngenguqulo yedemo. Ukuhlolwa kumahhala ngokuphelele. Eminyakeni engamakhulu amabili edlule, u-Adam Smith wathola okuphawulekayo: ukukhiqizwa kwezimboni kufanele kuhlukaniswe kube imisebenzi elula futhi eyisisekelo kakhulu. Uveze ukuthi ukuhlukaniswa kwezisebenzi kukhuthaza ukukhula komkhiqizo njengoba abasebenzi abagxile emsebenzini owodwa beba izingcweti ezinekhono futhi benza imisebenzi yabo kangcono. Kuwo wonke ama-19th and 20th century, abantu bahlela, bathuthukisa, futhi baphathwa izinkampani, beholwa umgomo wokuhlukaniswa kwezabasebenzi ngu-Adam Smith. Kodwa-ke, ezweni lanamuhla, kwanele ukubhekisisa noma iyiphi inkampani - kusukela esitokisini somgwaqo kuya kumdondoshiya wamazwe ngamazwe njengeMicrosoft noma iCoca-Cola. Kuzotholakala ukuthi imisebenzi yezinkampani iqukethe inani elikhulu lezinqubo zebhizinisi eziphindaphindayo, ngayinye ewukulandelana kwezenzo nezinqumo ezihloselwe ukufeza umgomo othile. Ukwamukela i-oda lamakhasimende, ukulethwa kwezimpahla ekhasimendeni, ukukhokhelwa kwamaholo kubasebenzi - konke lokhu kuyizinqubo zebhizinisi lapho uhlelo lokusebenza olusizayo ludingeka kakhulu.